Christian Praise Song | राज्यका दृश्यहरू सधैँ नयाँ जस्तै हुन्छन् | सर्वशक्तिमान् परमेश्‍वरको मण्डली
Christian Praise Song | राज्यका दृश्यहरू सधैँ नयाँ जस्तै हुन्छन्
15 अगस्ट 2021
पूर्वबाट बिहानीको किरण झुल्किन्छ, मुक्तिदाता हाम्रो बीचमा फर्की आउनुभएको छ।
सबै कुरामा जीवनको नयाँ चमक छ, राज्यको जीवन सुरु भएको छ।
बिहानी हुन्छ, हाम्रो आँखैअघि ज्योति फैलिन्छ, शताब्दीयौंको आशा पूरा हुन्छ।
अब मेरा पीडाका दिन गए, मेरा भयानक समयहरू गए।
परमेश्‍वरका वचनहरूले हाम्रो हृदयलाई तृप्त पार्ने भएकोले,
हाम्रो जीवनले भरण-पोषण पाउँछ।
हामीलाई आशिषित र उल्लसित भएको आभास हुन्छ।
हाम्रो पुस्ताको सौभाग्य भनेको परमेश्‍वरकहाँ फर्कन पाउनु हो।
यो परमेश्‍वरको महान् प्रेम हो।
राज्यको युगको जीवनमा प्रवेश पाउने कुराको चाह कसले गर्दैनथियो र?
कसले यसको तृष्णा गर्दैनथियो र?
परमेश्‍वरको न्यायद्वारा हामीलाई विजय गरिएको छ, र हामीलाई परमेश्‍वरले मुक्ति दिनुभएको छ।
हामी साँच्‍चै उहाँलाई धन्यवाद दिन्छौं र उहाँको प्रशंसा गर्छौं।
हामी उहाँको प्रशंसा गर्छौं र हामी धन्यवाद दिन्छौं।
फूलहरू फुल्छन्, वासना छर्छन्, चरीहरू गाउँछन्,
परमेश्‍वरका मानिसहरूले मानिसको पुत्रको प्रचार गर्छन्।
हामी उहाँको पुनरागमनको गवाही दिन्छौं, र हामी हरेकले हाम्रा भावनाहरू व्यक्त गर्छौं।
हामी भक्तिपूर्वक प्रार्थना गर्छौं र उच्‍च स्वरमा गाउँछौं।
हामी परमेश्‍वरको सिंहासनअघि निहुरिन्छौं र घुँडा टेकेर उहाँको प्रशंसा गर्छौं।
समुद्रपारिका दाजुभाइ-दिदीबहिनीहरू, हामी एकसाथ हर्षोल्‍लास गरौं।
हामी उहाँको प्रशंसा गर्छौं…।
सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्‍वर, आखिरी दिनहरूका ख्रीष्ट आफ्‍नो काम गर्न देहमा देखा पर्नुहुन्छ।
उहाँले मानिसलाई न्याय गर्न सत्यता व्यक्त गर्नुहुन्छ, उहाँका वचनहरूले मानिसहरूलाई धुन्छ र सिद्ध पार्छ।
हाम्रो सारा सामर्थ्यले अघि बढ्दै, हामी हाम्रो सारा शक्तिले संघर्ष गर्छौं।
परमेश्‍वरको इच्‍छा पूरा गर्न हामी हाम्रो कर्तव्य विश्‍वासयोग्य ढङ्गले पूरा गर्छौं।
पत्रुसको स्वभाव लिएर, हार नखाने संकल्‍पको साथ
हामी मानवको साँचो जीवन जिउँछौं,
परमेश्‍वरको इच्‍छा पूरा गर्न हामी कठिन परिश्रम गर्छौं।